Miasa amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny ranomasimbe eran-tany sy hanatsara ny fiveloman'ireo vondrom-piarahamonina mpanjono nentim-paharazana.
Nampahafantarina tamin'ny roapolo taona niara-niasa tamin'ireo vondrom-piarahamonina amorontsiraka manerana ny Ranomasimbe Indianina sy any ivelany, miara-miasa amin'ny mpanjono madinika sy ny fikambanan'ny vondrom-piarahamonina izahay mba hamahana ny fanjonoana tafahoatra sy ny fiarovana ny fiainana an-dranomasina amin'ny fomba mahasoa azy ireo.
Miara-mamolavola, mandanja, manamafy ary manohana ny fitantanana sy ny fiarovana ny jono eo amin'ny fiaraha-monina isika. Manangona mpiara-miombon'antoka amin'ny tambajotra izahay mba hisolo tena ny fanavaozana, ary mizara fitaovana sy fomba fanao tsara indrindra hanohanana ireo vondrom-piarahamonina mpanjono manerana izao tontolo izao.
Ny fiarovana ny zon'ny mpanjono no fototry ny asantsika. Manerana izao tontolo izao, mpanjono an-jatony tapitrisa no lavina ny zony hiditra sy hitantana ny toeram-panjonoana nentim-paharazana, noho ny toerana niaviany.
Amin'ny alàlan'ny asantsika dia manome fahafahana azy ireo hiantoka sy hanohana ireo zo ireo izahay, hanatsara ny fitantanana eo an-toerana, hampanan-karena ny fivelomana eo an-toerana ary hanohana ny ranomasina salama ho an'ny taranaka ho avy.